"မယ်စကြာ ၀ဠာ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲ" | venuscurves
"မယ်စကြာ ၀ဠာ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲ"
• Miss Universe Myanmar 2014 •
ယခုနှစ် ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Las Vegas မြို့တွင် ကျင်းပမည့် "မယ်စကြာ ၀ဠာ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲ" Miss Universe 2014 Contest တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် မည့် အလှမယ်တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ရန်၊ "မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၄ " Miss Universe Myanmar 2014 Contest ကို၊ ၂၀၁၄ ဇူလိုင် ၂၆ ရက် စနေနေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန် မြို့ အမျိုးသားဇာတ်ရုံတွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး၊ မြ၀တီ နှင့် မြ၀တီ (documentary) ရုပ်သံလိုင်း များမှ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းသို့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးကျယ်အခမ်းနာဆုံး အလှမယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည့် ၁၉၅၂ တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သော နှစ်စဉ် မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲ (Miss Universe Contest) တွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ၁၉၅၈ ၁၉၅၉ နှင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ် များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၀ အမေရိကန်ပြည်ေ ထာင်စု Miami မြို့တွင်ကျင်းပသည့် မယ် စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲ ၁၉၆၀ (Miss Universe Contest 1960) တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ (ဒေါ်) မြင့်မြင့်မေ မှ၊ Miss Congeniality ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
၅၃ နှစ်အကြာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် "မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၃ ပြိုင်ပွဲ" Miss Universe Myanmar 2013 Contest ကို ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့သောအခါ၊ မိုးစက်ဝိုင် (Moe Set Wine) မှ မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၃ Miss Universe Myanmar 2013 အဖြစ် အရွေးချယ် ခံရပြီး၊ ၂၀၁၃ နိုဝင် ဘာ ၉ ရက်နေ့ ရုရှသမ္မတနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တွင် ကျင်းပသည့် "မယ်စကြာ ၀ဠာ၂၀၁၃ ပြိုင်ပွဲ" Miss Universe 2013 တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အလှမယ် Pageant အဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ဇူလိုင် ၂၅ (သောကြာနေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီ) အမျိုးသားဇာတ်ရုံတွင် Miss Universe Myanmar 2014 Contest (Final Rehearsal Day - Friday July 25, 2014) "မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၄ ပြိုင်ပွဲ" ၀တ်စုံပြည့်နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
၀တ်စုံပြည့်နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ပွဲ လက်မှတ်ရောင်းရငွေ (ကျပ် ၇၀၀၀ တန်း၊ ကျပ် ၅၀၀၀ တန်း၊ ကျပ် ၃၀၀၀ တန်း) အားလုံးကို ကချင်ပြည်နယ်မှ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များအား လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပါ သည်။
Posted by VC at 11:27 PM
Labels: MissUniverse MU2014
Flora Veloso is Miss Earth Argentina 2021
Happy One – Pageant Set
Miss Globe Myanmar 2014 _ Hla Yin Kyay
Ju San Thar
Miss Universe Myanmar 2014 _ Shar Htut Eaindra
Ariella Arida - Miss Universe 2013 3rd Runner-Up
Miss Universe Kosovo 2014
Miss Universe Israel 2014 / Doron Matalon
Miss Asia Pacific World 2014 _ May Myat Noe
၂၀၁၄မယ်စင်္ကြာဝဠာမြန်မာ သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ သို့ ပေးစာတစ...
လုံးကြီးပေါက်လှ (ဇွန်သင်ဇာ) Zune Thin Zar
Zune Than Sin
Miss Universe Myanmar 2914 _ Shar Htut Eaindra
miss universe myanmar 2014 ဒီဗီဘီနဲ့အင်တာဗျူး
swimming suit compettition miss universe myanmar
Nia's First Photo Shoot as Miss USA 2014
Mrs.Universe Thailand 2014, Wanphen Chaikamrong
Miss Golden Land Organization မှ ခင်ဝင့်ဝါနှင့် ထာ...
ဂျူးစံသာရဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့ ရေးသားချက်ြ
ဂျူးစံသာမှ စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများသို့ပြန်လည်ဖြေရှင်...
ဂျူးစံသာနှင့် သူမမိသားစုဝင်များ Miss Globe Myanmar...
ခဏတာ _ ဂျီလတ်
နိုရာ - ကိုကိုမောင်
Miss Globe International Myanmar 2014 _ Ju San Thar
Miss Universe Israel 2014, Doron Matalon
Miss Universe 2013 Gabriela Isler in Azerbaijan
Marcela Chmielowska Miss Universe Poland 2014.
ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူး''' ယောက်ကျာင်္းပီသစွာပဲပြေ...
မြန်မာအလှမယ်ရဲ့စိတ်ထား ရိုးသားဖြူစင်မှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝ...
Bad Girls _ Htike Htike and Cha Cha
Sabrina Beneett, Miss Malaysia 2014
Chan Chan ချမ်းချမ်းနဲ့ သမီးလေး
Anna Andres, Miss Ukraine 2014
Andjelka Tomašević, Miss Serbia 2014
ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အသက် ၂ဝပြည့်မွေးနေ့ ဘယ်လောက်ခမ်းနာ...
Top 10 Miss Universe 2013 from Great Britain Amy W...
သီရိရှင်းသန့် ရဲ့ အများသိစေရန်ကြော်ငြာချက်
Miss Universe 2008 (Venezuela) and Miss Universe ...
Miss Univrse Venezuela 2014
Miss Universe Australia 2014.
Miss Universe Myanmar 2014 _ Waist No.8 (Thaw Ri K...
Miss Puerto Rico Universe 2014
MissAsia Pacific World 2014May Myat Noe,
Miss Universe Myanmar 2013 _ Moe Set Win
Model M Seng Lu
Gonyi Aye Kyaw - Miss Myanmar International 2013
Miss Iowa, Born With One Arm
Model Awn Seng
MISS UNIVERSE MYANMAR 2014 FINALISTS IN SWIMSUITS
To Miss Supranational Myanmar 2013 _Khin Wint War
Elfin Pertiwi Rappa - Miss Indonesia International...
Miss Supranational 2013, Mutya Johanna Datul
Marline Barberena, Miss Universe Nicaragua 2014
Actress Ei Chaw Po
Miss Supranational Myanmar 2013 _ Khin Wint War
MoeSetY & YunYun,
มิสยูนิเวิร์สพม่า 2014 เก็บตัวชุดว่ายน้ำ งามไม่แพ้ไทย
News(Ni Ni Khin Zaw)
Miss Universe Myanmar 2014 _ Waist No.20 ( Eaint M...
Model Thae Naw Zar
Song ( Hmaw Lint Chat Ta Sone Ta Yar _ Ni Ni Khin ...
► 2013 (3627)